चैत ९ देखि १३ दिनसम्म के के अत्यावश्यक सेवामात्र चल्छ? राजपत्रमा यस्तो छ – MySansar
चैत ९ देखि १३ दिनसम्म के के अत्यावश्यक सेवामात्र चल्छ? राजपत्रमा यस्तो छ
Posted on March 20, 2020 March 20, 2020 by Salokya
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशैभर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक, सामुदायिक तथा निजी सेवा प्रदायक संस्थाहरूबाट प्रदान गरिने नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिए अनुसारका अत्यावश्यक सेवा बाहेकका अन्य सबै सेवाहरु आगामी चैत ९ गतेदेखि चैत २१ गतेसम्म बन्द गरिएको घोषणा गरेका छन्। यी १३ दिन अत्यावश्यक बाहेकका सेवाहरु बन्द हुनेछन्। यही १३ दिन भित्र नै चैते दशैँ र रामनवमी पनि परेका छन्। यसपालि यी चाडहरु आंशिक लकडाउनमा नै मनाइनेछन्।
राजपत्रमा प्रकाशन गरिएका अत्यावश्यक सेवा भनेका के हुन् त? राजपत्रमा नयाँ सूचना त प्रकाशित हुँदै गर्ला तर पुरानो सूचना भने अस्ति असोज २७ गते प्रकाशन भएको छ। त्यतिबेला आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐनलाई उद्‍धृत गर्दै हड्ताल गर्न निषेध गरिएका आवश्यक सेवा प्रकाशन गरिएको थियो। के के हुन् त ती?
ती आवश्यक सेवा १९ वटा रहेका छन्। यस्तो छ सूची
यसमा हवाई र स्थल यातायात सेवा पनि परेका छन्। तर सरकारले चैत ९ देखि १८ गतेसम्म विदेशबाट कुनै पनि विमान नेपाल भित्रिन नपाउने घोषणा गरिसकेको छ। त्यस्तै स्थल यातायात तर्फ पनि चैत १० गतेदेखि अनिश्चितकालसम्म लामो दूरीका यातायात नचल्ने घोषणा सरकारले गरिसकेको छ।